Daarood Ismaaciil iyo Tigree Ismaaciil Soomaalidu waxay aad u qiimaysaa xiriirrada bulshada. Cidda la jecelyahay ama la soo dhawaynayo waxaa lagala ambaqaadaa meesha ugu dhaw ee xiriirka lagala leeyahay,sida: tolnimada, reer abtinimada, xididnimada, darisnimada, isbahaysiga,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
saaxiibnimada iwm. Xiriirka ugu weyn ee ay qadariyaan waa abtirsiga haddii uu doono haba dheeraadee (yeysan isu dhowaan). Cidda ay muujinayaan xiriirka adag ee ka dhexeeya waxay ugu abtiriyaan awoowayaashood. Waxay sidaa ku noqdaan dad isku hayb ah oo si siman uga wada faa�iidaysta isbahaysigaas oo magta wada bixiya, hiil iyo hoo-na ka dhexeeyo,quud iyo qaaraana wadaaga.
Xiriirka noocaan ah wuxuu dhexmari jiray Soomaalida uun, taariikhdana laguma hayo in isbahaysi noocaan ah oo dhexmaray Soomaalida iyo qolo gaalo ah. Ka dib markii
gumaysigu ka adkaaday kacdoonadii lagaga soo horjeeday, dalkana uu si buuxda gacanta ugu dhigay ayaa waxaa bilowday hunu hunu sheegaysa in ay jiraan qabaa�il iyo afraad xiriir hoose la leh gumaysiga, waxaana soo shaac baxay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen: Pro Talyan oo lagu magacaabi jiray kooxo ka soo horjeeday xorriyadda, mase jirin cid si bareer ah hayb ula sheegata gumaysiga. Xilliyadii dambe ee jabhadaha mucaaradka Soomalidu u galeen Xabashida ayay dadka qaar bilaabeen in ay gaalada ugu abtiriyaan awoowayaashood; si ay u muujiyaan xiriirka dhaw ee ka dhexeeya, ka dibna waxay noqotay wax la isaga daydo oo qoladii qabqableheedu Xabashida u galaba ay ku tillaabsato. Waxaynu maqalnay Tigreegu waa Jabarti, Facaye Sade, Xarle Koombe �iwm. Haddaba aynu is weydiinee maxaa ka dhab ah isbahaysiyadaan?, maxaase ka dhalanaya oo dhib iyo dheef ah?.
Ugu horrayn isbahaysiga Soomaalidu wada gali jirtay wuxuu ahaa mid dhab ah oo daacad laga wada yahay, <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />kan Xabashida lala galayse waa is moodsiise ma aha wax dhab ahaan jira. Xagga nafciga isbahaysiga Soomaalidu wuxuu ahaa mid labada dhinacba ka wada faa�iidaystaan, kanse waa mid 100% u adeegaya Xabashida oo qur ah, qabiilka la socdana aysan waxba ka faa�iidayn haba yaraatee, marka laga reebo in ay reer hebel kale ku xumaynayaan. Mar kasta oo duulaan la qaadayo waxaa afka la soo saaraa xagga Soomaaliya, cid kasta oo la dilayo ama xoolo kasta oo la qaadayana waa kuwa Soomaaliyeed ee marna ma dhacdo in xagga Itoobiya weerar loo wada qaado, mana jirto mar la wada laayo Xabashi ama la wada dhoco xoolo Xabashiyeed. Marka dhinac kale laga eego xilfigaan wuxuu u dhisan yahay in lagu waxyeeleeyo gaar ahaan dadka iyo deegaanka qabiilka la socda Xabashida; maxaa yeelay jabhad walba waxay Xabashidaku soo hogaamisaa deegaanka qabiilkeeda. Xabbaddii dhacdana waxay haleelaysaa dadkooda ama duunyadooda. Tan kale inta halganku socdo waxaa Xabashida fursad loo siiyaa in ay si buuxda u dhexgasho qabiilkaas, qaybihiisa iyo deegaankiisa, waxayna xiriir adag la yeelataa dad badan oo muhiim ah. Ugu dambayntana kuwii keenay ayay kuwo kale ka hoos samaysaa oo iyagii kaga takhalustaa. Intaa waxaa dheer dhibaatooyin isugu jira kuwo diineed, nabadgalyo, miskexeed, dhaqan iyo dhaqaale oo laga dhaxlayo isbahaysiga Xabashida. Xagga abtirsiga: Odayaasha loogu abtiriyay Xabashida iyo dadka ku abtirsada
odayaashaas badankoodu wax xiriir ah lama laha Xabshida ee xiriirkaani wuxuu ku
kooban yahay kuwa la shaqaysta uun, sidaa darteed waa in aysan abtirkeena siin
gaalada ee ay iyagu ku abtirsadaan awoowayaal Xabashi ah, tusaale ahaan: hebel
Tigree ama hebel Amxaar iwm. Xagga diinta: Dhibaatooyinka ka dhashay isbahaysigaan way wada taabanayaan diinta,intii aynu soo sheegnayse waxaynu ku kordhinaynaa arrimahaan:
1.Waa wax lagu kala fogaynayo muslimiinta, gaaladana lagu soo dhaweysanayo,
muslimiintuna dhab ahaan iyagaa walaalo ah, gaaladuna cadaw ayay u wada tahay. 2.Waxay qaadaysaa teedka nacayb iyo colaadeed ee u dhexeeya muslimiinta iyo
3.Waxay tirtiraysaa caqiidada ka bari noqoshada gaalada iyo wali ka dhigashada
muslimiinta, waxayna dhimaysaa ka didista gaalnimada.
4.Waxaa lagu xadgudbayaa awoowayaasha muslimiinta ah oo loogu abtiriyay ama lala walaaleeyay gaalada.
5.Waa been abuur cad oo lala jahrayo.
Inta aynaan xalka ka hadlin aynu is weydiino asbaabta keentay in dadkeena qaarki ku
qamaamaan Xabashida ilaa qaarkood jacaylkeeda ku kawkabaan. Waxaa ka mid ah asbaabta mushkiladaan keentay: jahliga oo si ba�an ugu faafay bulshada. Iyada oo muddo dheer si qorshaysan dadka looga fogeeyay diintooda. Wacyiga bulshada oo aad iyo aad u hooseeya. Dadkii xulka ahaa oo loo jarabaray nacamle-nimo, taas oo keentay in ay hadba kii hoggaanka u qabta daba kacaan. Dulmiga qabiilooyinku isu gaysteen oo qaarkood gaarsiiyay: (rag ciil cadaab ka dooray) iyo (Rabbi ka baq iyo rag iska dhici meel ma wada galaan).
Maxaa xal ah?: Ma jirto mushkilad aan xal lahayn, tanina ma aha mid ugub ee waa musiibo meelo
badan iyo waqtiyo kala duwan ka dhacday caalam Al-islaami. Dhawr qodob ayaynu soo qaadaynaa oo qayb ka noqon kara xalka mushkiladaan:
1.In lala dagaalamo jahliga, lana faafiyo cilmiga, gaar ahaan caqiidada islaamka.
2.In bulshada si wacan loo wacyigaliyo, lana kala baro cadawgeeda iyo sokeeyeheeda.
3.In la joojiyo, lalana dagaalamo dulmiga iyo xadgudubyada la isu gaysanayo,
gaar ahaan dadka laga taagta roonyahay ama laga tiro badanyahay.
4.In kooxdii gaalada raacda loogu abtiriyo kuwa ay raaceen ee aan la oran reer
hebel ayaa gaalada la safan; maxaa yeelay dambi dad gaar ah faleen ayaa qabiil dhan
oo muslim ah la saarayaa. Tan kale ceeb ay kaligood la madoobaan lahaayeen ayaa laga fududaynayaa.
5.In la gumeeyo oo la weel duwo kuwa gaalada raacay ilaa ay ka toobad keenaan. 6.In dadkeenu garwaaqsado in dadka u gacan haadinaya aysan dantooda wadin ee ay
dan u gaar ah ku gaarayaan.
7.In hoggaanka qabaa�ilka gacanta loo galiyo dad u danqanaya bulshada, isla
markaana leh dadnimo ay maya ku dhahaana kuwa marin habaabinta wada.
8. In xoog la saaro heshiisiinta qabiilooyinka is qabta. Gabagabadii shaki kuma jiro in aysan ka dhaxayn Daarood iyo Tigree wax xiriir
dhalasho ah oo Nabi Nuux ka sokeeya. Xagga diintana midna Nabi Muxammad (scw) ayuu tawxiidka ku raacay, midna Pulse ayuu shirkiga ku dabagalay. Waxa aan cinwaanka sidan ugu doortay in aan loo fahmin in aan dad gaar ah u jeedo, taas oo keeni karta in ay dadka qaar ka qadaan nuxurka qormada. Axmed C/samad
aragtida qoraagu ka turjumi mayso shabadka wararka Waayaha.net